သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War စတင်နေပြီလား? - SHAN News (Burmese)
Home သတင်း စီးပွားရေး သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War စတင်နေပြီလား?
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဝမ်ဟိုင်း နဲ့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် လွိုင်တိုင်းလျဲန်းတို့ဟာ ၂၀၁၇ က စပြီး နယ်မြေစိုးမိုးရေးအားပြိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲကြောင့် သျှမ်းလူထု အသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးရတာတွေ၊ စစ်ဘေးရှောင်နေရတာတွေကြောင့် သျှမ်းပြည့်ကံကြမ္မာအတွက် မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ ရင်နင့်နေသူဟာ ကျနော် တစ်ယောက်တည်း တော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။
RCSS ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်နှင့် SSPP ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပန်ဖှ
သျှမ်းအမျိုးသားအတွက် ရှေ့တန်းတင်ဖို့၊ စည်းလုံးဖို့၊ တောင်းဆိုနေတာတွေလဲ ဘယ်နားဝင် ညာနားထွက် သံဃာထု၊ လူထုအသံကို နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေက ဉပက္ခာ ပြု လျစ်လျူရှု နေကြပါတယ်။
တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ –
တစ်ဖွဲ့က -“ခင်္ဗျားတို့ တောင်ပိုင်းကို အားလုံး တပ်ဆုတ်ပြန်မှ ဆွေးနွေးမယ်၊ မြောက်ပိုင်းကို ထိုးစစ်ဆင် နေသရွေ့ ဘယ်တော့မှ မဆွေးနွေးဘူး” – လို့ပြောတယ်။
နောက်တစ်ဖွဲ့ကလည်း -“ခင်္ဗျားတို့လဲ သျှမ်းပြည်အရေးအတွက်လုပ်တယ်၊ ကျုပ်တို့လဲ သျှမ်းပြည်အ ရေးအတွက်လုပ်တယ် ဆိုတော့ အရင်ဉီးဆုံးဆွေးနွေးမယ်။ ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်ရရင် တပ်ဆုတ်မဲ့ကိစ္စ မခက်ပါဘူး” – လို့ ပြောပြန်တယ်။
အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်း သံဃာတွေကြားဝင်ပေးမှုကြောင့် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ တိုက်ပွဲရပ်နားသွားပေမယ့် မနှစ် ၂၀၂၀ သင်္ကြန်ကာလနောက်ပိုင်း နှစ်ဖွဲ့ကြား စစ်ပွဲပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။
အရင်တုန်းက ကျနော်အမြဲ ယုံကြည်ခဲ့တယ် ။ ဒီတပ်နှစ်တပ်ဟာ – “သျှမ်းအချင်းချင်းပဲ၊ ဘာသာ စာပေ စကား အတူတူဘဲ၊ နိုင်ငံရေးဉီးတည်ချက်လဲ ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ် ကိုအခြေခံပြီး တိုင်းပြည် ကို ဖက်ဒရယ် စနစ်နဲ့ ထူထောင်လိုတယ် ဆိုတာအတူတူဘဲလေ။ အရင်တုန်းက မဆွေးနွေးနိုင်တာက တစ်ဘက်ကွန်မြူနစ်၊ တဘက်က ဒီမိုကရေစီ ကြောင့်မဆွေးနွေးနိုင်တာလေ”
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့မေက စပြီး သတင်းတွေဟာ အများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ ထင်ယောင် ထင်မှားတွေဖြစ်စေတဲ့ သတင်းတု သတင်းမှားတွေလည်းအများကြီးတွေ့လာတယ်။ သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War တွေများ ဖြစ်တော့မလား ဆိုတာတွေးမိလာတယ်။
ကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War တွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြလိုပါတယ် – ကိုယ်စားပြုတိုက်ပွဲ Proxy War ဆိုတာ တိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲဟာ မိမိအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် တိုက်တာမဟုတ်ဘဲ တခြားသူတွေအတွက် တိုက်ခိုက်ပေးတာ၊ အသေခံပေးတာလို့ အကြမ်းဖျင်းနားလည် ထားလိုက်ပါ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အတွေကတော့ တကယ့်သတင်းအစစ်အမှန်ပါ။ ဆရာဉီးခွန်စိုင်း ပြောပြောနေတဲ့ FBI – Facebook Intelligence သတင်းတု သတင်းမှားတွေမဟုတ်ပါဘူး။
မေလဆန်းပိုင်းက ဗိုလ်ကြီး ဆိုင်ငါးမိန်း SSPP က စစ်သည်အင်အားများစွာ ဉီးဆောင်ပြီး (၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက RCSS အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသ ခြေကုပ်နေထိုင်တဲ့) ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း မြောက်ဘက်ခြမ်း ၁၉ အုပ်စု ဒေသ လို့ လူသိများတဲ့ မန့်ဟျိုးမြို့နယ်ခွဲဘက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဒေသခံလူထု နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ကြီးက – “RCSS ဒီမှာ ရှိနေတာ တရုတ်ဘက်က သိပ်သဘောမတွေ့လို့ ဒို့ SSPP လာရောက်နေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်” – ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RCSS ကလည်း မေလ နှောင်းပိုင်းက တရုတ်သံအရာရှိ တစ်ဉီးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ပုဂ္ဂိုလ်က – “RCSS ဆိုတာ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဉီးဆောင်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဗိုလ်မိုးဟိန်း SURA ကနေဆင်းသက်လာတယ်။ SSPP ကတော့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗကပ နဲ့ မဟာမိတ် ဆိုတော့ အခုလဲ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ RCSS က အမေရိကန် ရဲ့ အဆက် မဟုတ်ပါဘူး။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ RCSS တပ်တွေက တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသွားမှာပါဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ SSPP တိုက်ထုတ်လို့ ခင်ဗျားတို့ မဆုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့ တောင်ပိုင်းကို တပ်ဆုတ်ပြန်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်မယ့်နည်း ရှိပါတယ် ” – လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဇွန်လ ၅ ရက် ၂၀၂၁ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ချိန်ဟိုင်နဲ့ စစ်ကောင်စီ ဉက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ တွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ – တရုတ်က မြောက်ပိုင်းမှာ RCSS တပ်ရှိတာကိုမလိုလားဘူး – လို့ တရုတ်သံအရာရှိတဉီးက ပြောကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
ဒီ သတင်း အချက် အလက် ၃ ချက် နဲ့ တခြား သိရှိရသေးတဲ့ အသေးအမွှားအချက်အလက်တွေ အားလုံးကို ချိန်ထိုးကြည့်ရင် တရုတ်ဟာ Science သိပ္ပံ၊ Technology နည်းပညာ အဲ့လောက်ခေတ်မီ တိုးတက်တာ၊ The Art of War ဆွန်းဇူး ရဲ့ စစ်ရေးနည်းပညာအရ သတင်းအချက်အလက်အပေါ် အရေးထားတာ ဘာ့ကြောင့် ကြက်ရိုးထိုး ဗေဒင် လို ယုံကြည်နေရပါသလဲပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ တတ်သိ ပညာရှင်ကြီးတွေကို တိုက်တွန်းလိုတာက – လက်ရှိ ဒို့သျှမ်းတပ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ၊ အသေခံပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတာဟာ မိမိအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်လား၊ သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားအတွက်လား ဆိုတာ ပါဘဲ။